Xasan Xanafi "Inaan Shahiido ayaan qoriga u qaatay, maantana wadadii waan marayaa" Dhageyso.
Monday April 11, 2016 - 11:50:31 in Wararka by Super Admin
ALLAHA u Naxariistee, Xasan Xanafi Xaaji Cabdi Salaam oo in muddo ah dhibane u ahaa tacaddiyada hey'adaha Ajaanibta ee Ashahaada la dirirnimada u jooga Soomaaliya ayaa maanta Rabbigiisa la kulmay, ka dib markii qowleysato u adeegta shisheeyaha a
ALLAHA u Naxariistee, Xasan Xanafi Xaaji Cabdi Salaam oo in muddo ah dhibane u ahaa tacaddiyada hey'adaha Ajaanibta ee Ashahaada la dirirnimada u jooga Soomaaliya ayaa maanta Rabbigiisa la kulmay, ka dib markii qowleysato u adeegta shisheeyaha ay ku toogteen magaalada Muqdisho.
Xasan Xanafi oo dhawaan si weyn u fadeexeeyay kuwa hadda dilay, ayaa cod cusub oo aan helnay wuxuu ku sheegay in marna aanu ka baqeyn geerida iyadoo xittaa uu arkayay in loo sii waday goobtii lagu toogan lahaa.
Codkaan cusub oo Xasan laga qabtay waqtiyadii u danbeysay ee noloshiisa ayuu ALLAH ku weydiistay inuu ka aqbalo camalkiisa, waxaana iyadoo cadowgiisu ay sii kaxeynayaan uu ku cel celiyay "Shahaado ayaan ALLAH ka rajeynayaa”.
"Ilaahey ha ii naxariisto, Ilaahey ha ii aqbalo camalkeyga, diinkiisa waan u soo dagaallamay, in aan la dulleysan diinkiisana wax badan waan u soo sameeyay” ayuu si dhiiranaan leh ku yiri Xasan Xanafi, ALLAHA u naxariistee.
Xiriirro kala duwan oo aan la sameynay ehelladiisa nooma suuragalin inaan helno, inkastoo aan la ogeyn in kooxihii dilay Xasan ay meydkiisa ku wareejin doonaan Aabihiis oo maalmihii u danbeeyay ku sugnaa magaalada Muqdisho.
Halkaan ka dhageyso Codka Xasan Xanafi